Groove: Tigidhada Khadka Caawinta ee Kooxaha Taageerada | Martech Zone
Haddii aad tahay koox iib ah oo soo galaysa, kooxda taageerada macaamiisha, ama xitaa hay'ad waxaad si dhakhso leh u aqoonsan tahay sida rajada iyo codsiyada macaamiisha ay ugu lumi karaan mawjadaha isdaba-joogga ah ee emayllada ee qof walba ka helo khadka tooska ah. Waa inay jirtaa dariiq ka wanaagsan oo lagu soo arruuriyo, loogu qoondeeyo, laguna dabagalo dhammaan codsiyada furan ee shirkaddaada. Taasi waa halka ay ka caawiso barnaamijka softiweerka miiska oo ka caawiya in la hubiyo in kooxdaadu ay diiradda saareyso ka jawaabiddooda iyo adeegga macaamiisha
Noocyada Nidaamka Tigidhada Taageerada Groove Online
Tigidhada kooxaha - U qoondee tikidhada xubnaha kooxda ama kooxaha gaarka ah. Kudar qoraalo gaar ah oo adiga iyo kooxdaada kaliya aad arki karto. Weydii su'aalo, soo jeedi, ama dib u eeg fariimaha xubnaha cusub ka hor intaan la dirin. Eeg sida saxda ah waxa ka socda Groove waqtiga dhabta ah. Waxaad ogaan doontaa goorta tigidhada la qoondeeyo, la dhammaystiro, dib loo furo, ama la qiimeeyo.
Faahfaahin macmiil - ugaarsi ugama sii jiri doono tikidhada duugga ah si loo arko waxa macmiilku ka hadlayo. Ku hel hal macaamil taariikhda taageerada oo dhan hal guji.
Qalabka waxsoosaarka - Kaydso jawaabaha su'aalaha caadiga ah, kuna dheji adigoo gujinaya farriin kasta. Abuur sumado caado ah si aad u abaabusho tikidhada ama u calaamadee tixraac mustaqbalka adiga oo isticmaalaya nidaam kasta oo adiga kugu habboon. Adeegso xeerar si aad otomaatig uga dhigto sida tikidhada loo maareeyo. Tusaale ahaan, tikit u qoro xubin ka mid ah kooxda iyadoo lagu saleynayo cidda ay ka yimaadeen, ama farriimaha calanka oo eraygu ku jiro degdeg ah.
Email - Nidaamka tikidhada dhibku haysto ee 'Groove' wuxuu umuuqdaa oo u dareemayaa sida saxda ah iimaylka macaamiishaada. Macaamiishaadu waligood uma baahnaan doonaan inay soo maraan nidaam kale oo soo gal ama tixraac lambarka tigidhada si ay caawimaad u helaan.
Warbaahinta bulshada - Eeg oo ka jawaab Tweets iyo farriimaha derbiga ee Facebook ee sheegaya magacaaga, oo si fudud ugu beddela farriimaha bulshada tigidhada taageerada.
Raad-raaca taleefoonka - Gali qoraal faahfaahsan oo ku saabsan wadahadalka taleefanka ee lagu keydin karo tikidhada, sidaa darteed waxay ku soo muuqanayaan taariikhda macaamilkaaga waadna tixraaci kartaa wakhti kasta.
Qiimeynta Qanacsanaanta - U oggolow macaamiishaadu inay qiimeeyaan jawaabahaaga oo ay ra'yi kaa siiyaan.
Base aqoonta - Ka caawi macaamiishaada internetka inay isku caawiyaan saldhig aqooneed.
Isdhexgalka Tigidhada Taageerada Groove
Widget - Qalabka fidinta taageerada ee 'Groove' wuxuu hubiyaa in macaamiisha ay had iyo jeer ogaadaan sida loola xiriiro, waxaana loo habeyn karaa inay dareemaan inay yihiin qayb aan xuduud lahayn oo ka tirsan bartaada.
API - Isticmaal annaga API si aad ugala soo baxdo xogta macaamiisha CMS-gaaga gudaha, barnaamijka biilka, ama barnaamij kasta oo kale oo xisbiga 3aad ah, kuna arag cinwaanka macmiilkaaga agtiisa tikidh kasta.
Chat Live - Laba-tallaabo SnapEngage ama is-dhexgalka wada-hadalka ee Olark ee tooska ah si aad sheekooyinkaaga ugu hayso Groove isla markaana u taageerto macaamiishaada waqtiga dhabta ah.
CRM - Isku xidhka Groove ilaa Highrise, Dufcaddii Buugga, Nimble, Zoho ama Kaabsal oo si fudud uga hel macluumaadkaaga macaamiisha qoto dheer CRM-gaaga, oo la arki karo isla markiiba tigidh kasta. Haddii taasi aysan ku filnayn, waxay siiyaan isdhexgal Zapier.
Email - MailChimp, Kormeeraha Ololaha, iyo isdhexgalka joogtada ah ee Xiriirinta.
debcin - isdhexgalka tooska ah ee isgaarsiinta kooxdaada.
jeexdin waa nidaam lacag-bixin ah oo aad ku dari karto isla markaana ka saari karto macaamiisha koontadaada, adiga oo isticmaalaya $ 15 bishiiba qofkiiba.
Bilow Tijaabadaada Bilaashka ah ee 30-ka maalmood ah
Tags: API widgetBuug-yarahaKormeerka OlolahakaabsolXiriir joogto ahjeexdinjeexdinmiiska caawintahelpdeskSaremailchimpNimbleSidoo kaleSnapEngagetaageerokooxda taageeradataageerada widgetkooxahaticketingzapierZoho
Jan 5, 2017 saacadu markay ahayd 11:54 PM
Waad ku mahadsantahay wadaagida faafaahinta weyn ee kusaabsan nidaamka Tigidhada Caawinta, sida ay u caawineyso kooxaha ..